मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू कसरी फेला पार्न र मदत गर्न | USAHello | USAHello
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू कसरी फेला पार्न र मदत गर्न
अमेरिकामा, मान्छे मानसिक स्वास्थ्य सेवा र व्यवसायीक मदत र उपचार प्राप्त गर्न को लागि यो धेरै साधारण छ. कसैले लज्जित वा आफूलाई वा परिवार सदस्य लागि उपचार खोज्न डराउनुपर्छ. डाक्टर र अन्य चिकित्सा पेशेवरहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार प्रदान. विभिन्न डाक्टर र उपचार बारे जान्नुहोस्. मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त गर्न पत्ता.
मानसिक स्वास्थ्य सेवा र व्यवसायीक
चिकित्सा पेशेवरहरुलाई परामर्श मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, चिकित्सा, र अन्य उपचार. यसलाई व्यवसायीक को विभिन्न प्रकार के थाहा मदत गर्छ.
Psychiatrists मानसिक रोग विशेषज्ञ गर्ने डाक्टर छन्. एक मानसिक रोगको चिकित्सक अन्य हेरविचार संग मानसिक रोग को उपचार को लागि चिकित्सा सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्नुहुन्छ. Psychiatrists अक्सर मानसिक रोग को सबै भन्दा गम्भीर अवस्थामा हेरचाह.
मनोवैज्ञानिक चिकित्सा डाक्टर छैनन्. तिनीहरूले निदान र मानसिक रोग उपचार, तर तिनीहरूले दबाइ सल्लाह दिन्छन् छैन. एक निदान के रोग एक व्यक्ति छ को एक चिकित्सा परिभाषा छ. एक मनोवैज्ञानिक आफ्नो निदान एक मानसिक रोगको चिकित्सक आवश्यक छ कि सोच्छ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई भन्नेछु.
मनोरोग र मानसिक स्वास्थ्य नर्स
मनोरोग र मानसिक स्वास्थ्य नर्स मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ र बिरामीको उपचार. तिनीहरूले आफ्नै चिकित्सा कार्यालय मा काम वा मानसिक रोगको चिकित्सक लागि काम गर्न सक्छन्. तिनीहरूले एक मानसिक स्वास्थ्य रोग लागि दबाइहरु सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यहाँ जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या व्यवहार अन्य लाइसेन्स व्यवसायीक छन्. तिनीहरूले सल्लाहकार समावेश, चिकित्सक, र सामाजिक कार्यकर्ता. तिनीहरूलाई केही एक क्षेत्र केन्द्रित हुन सक्छ, यस्तो विवाह रूपमा, परिवार, पदार्थ दुरुपयोग वा आघात.
तपाईं नजिकै मानसिक स्वास्थ्य सेवा कहाँ फेला पार्न
अस्पताल मा मानसिक स्वास्थ्य प्रदायक काम, क्लिनिक, र निजी मेडिकल अभ्यासहरू. आफ्नो परिवार आवश्यकता तपाईं वा कसैलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या मद्दत भने, तपाईँको नियमित डाक्टर सोध्न. आफ्नो डाक्टर कार्यालय एक मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक हुन सक्छ.
तपाईं पनि तपाईंलाई नजिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् FindHello. आफ्नो ठेगाना वा शहर नाम लेख्न र त्यसपछि छनौट “स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य।”
द्वारा फोन र अनलाइन मानसिक स्वास्थ्य सेवा
तपाईं नजिकै मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि छैन, तपाईँले अझै पनि मद्दत प्राप्त गर्न सक्छन्. यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबैतिर मद्दत प्रस्ताव केही संगठन हो:
मानसिक रोग मा राष्ट्रिय गठबन्धन संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइनहरूमा सूची छ.
अमेरिका को चिंता र अवसाद संघ फिक्री र निराशा र चिकित्सक को एक निर्देशिका बारेमा जानकारी दिन्छ.
resettled शरणार्थी र यातना को बचे लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवा
Resettled शरणार्थी 'मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकता अन्य ती फरक हुन सक्छ. युद्ध विगतका अनुभव, प्रकोप, यातना वा resettlement प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ. त्यहाँ यातना को बचे भएका resettled शरणार्थीका लागि मानसिक स्वास्थ्य स्रोतहरू छन्:
तपाईं आफ्नो resettlement एजेन्सी वा स्वास्थ्य केन्द्र ती सेवाहरू तपाईं जडान गर्न अनुरोध गर्न सक्छ.
तपाईं मा अनलाइन संसाधन पाउन सक्नुहुन्छ यातना घाइते भएकाहरू लागि केन्द्र को वेबसाइट.
तपाईंलाई तपाईं नजिकै शरणार्थीका लागि स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छ FindHello. आफ्नो ठेगाना वा शहर नाम लेख्न र त्यसपछि छनौट “स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य।”
मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तपाईं आफ्नो पछिल्लो बारेमा प्रश्न हुनेछ. तिनीहरूले राम्रो आफ्नो अवस्था बुझ्न र तपाईं कसरी मदत गर्न निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ. शरणार्थी आफ्नो अनुभव बारे कुरा upsetting वा गाह्रो हुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य प्रदायक छ भनेर बुझ्न. तिनीहरूले केहि बताउन तपाईं बल छैन. तपाईं आफ्नो जीवनको बारेमा अलिकति बिट साझेदारी गरेर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो ठिक छ.
थप स्वास्थ्य जानकारी